Daawo Afgambigii Gil Gilay dalka Ethiopia iyo raysal wasare Apy oo xalay Xili danbe ka hadlay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Daawo Afgambigii Gil Gilay dalka Ethiopia iyo raysal wasare Apy oo xalay...
Daawo Afgambigii Gil Gilay dalka Ethiopia iyo raysal wasare Apy oo xalay Xili danbe ka hadlay
Ciidamo gadoodsan ayaa isku dayey inay afgembi ka ridaan maamulka Amxaarada ee dalka Itoobiya.
Wararka laga helaya magaalada Bahar Dar ee xarunta maamulka Amxaarada ee dalkaasi ayaa sheegaya in ciidamado gadoodsani ay damacsanaayeen inay la wareegaan awooda maamulkaasi, kuwaas oo isku dayey inay dilaan madaxweynaha ka dib markii ay gudaha u galeen xafiiskiisa balse la fashiliyey hawlgalkii ay wadeen.
Xoghayaha saxaafada ee xafiiska raysal wasaaraha Itoobiya Negussu Tilahun ayaa warbaahinta u sheegay in isku dayga afgembi uu dhicisoobay, isaga oo cadeeyey in afduub loo gaystay madaxweynaha maamulkaasi.
“Waxa uu ahaa isku day afgembi oo abaabulan oo ka dhacayBahar dar balse waa uu fashilmay” Negussu Tilahun mar uu la hadlay telefishanka dalka Itoobiya.
Xoghayaha warfaafinta ee xafiiska raysal wasaaraha Itoobiya ayaa ka gaabsaday inuu cadeeyo cida ka dambaysay afgembigan dhicisoobay ee ka dhacay maamulka Amxaarada.”
Sidoo kale wararka ka imanaya Bahardar ee ay baahinayso warbaahinta Itoobiya ayaa sheegaya in xaalada magaaladaasi ay kacsan tahay iyada oo ay jirto rasaas ay iswaydaarsanayaan ciidamada isku dayey afgembiga iyo kuwa maamulkaasi.
Previous articleTrump: Hadii dagaal qarxo Iran waa la tirtiri
Next articleMadaxweynihii gobolka Amxaarada oo lagu dilay “afgambigii fashilmay” ee ka dhacay Itoobiya